Rugby sokajy Federaly 2 Tompondaka ny Uasc Besetroka
Tsy nisakana ny fanarahana ny lalao famaranana rugby sokajy federaly 2 notontosaina teny amin’ny kianja Makis
Andohatapenaka, afak’omaly alahady 16 febroary 2020, ny orambe nijojo nandritra io lalao io. Tafavoaka ho tompondakan’i Madagasikara ny Uasc Cheminots Besetroka rehefa nandavo ny Mang’art Manjakaray 16-09 (efa nitarika 10-03 ry zareo teo am-pialantsasatra). Ireto ekipa 2 ireto izany no miakatra any amin’ny sokajy federaly 1 amin’ny taom-pilalaovana ho avy. Ny fileovana Fbm Bemasoandro nandresy ny Soe Stade 21-18 no nitana laharana faha-3 tamin’ity fifaninanana ity.
Teo amin’ny vokatr’ireo lalao fiadian-toerana sokajy federaly 1 Gold Top 20-2019 koa no nahazoana ny vokatra :
Ftma Ankasina 34- 25 3Fai Vakinankaratra
Ftm Manjakaray 22 – 19 Cnaps Matsiatra Ambony.